UPDATE: Faah-faahin cusub qaraxii maanta lala beegsaday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Faah-faahin cusub qaraxii maanta lala beegsaday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada.
UPDATE: Faah-faahin cusub qaraxii maanta lala beegsaday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada.
Muqdisho (Halqaran.com) – Faah-faahin cusub ayaa waxaa ka soo baxeysaa qarax maanta duleedka Magaalada Muqdisho lagula beegsaday gaadiid uu la socday Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida, Xasan Cali Nuur (Shuute).
Gaadiidkan ayaa waxaa qaraxa lagula beegsaday Deegaanka Tareedisho ee duleedka Magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaraxan waxa uu ka dhacay wadada jaayga ee xigta dhinaca Degmada Kaxda.
Weerarkan ayaa dhacay xilli gaadidka ay ku sii jeedeen Magaalada Muqdisho, kana yimaadeen Deegaanka Ceel Saliini ee Gobolka Shabellaha Hoose. Gudoomiyaha ayaa xalay ku hoyday Xerada Ceel Saliini, oo maalintii Axada ay weerar culus ku qaadeen maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi uu burbur soo gaarsiiyay mid ka mid ah gaadiidkii galbineysay Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada, isla-markaana uu badqabo Xasan Cali Nuur (Shuute).
Goobjoogeyaal ayaa sheegay in laba askari uu dhaawac culus ka soo gaaray qaraxaasi, lamana soo sheegin cid ku dhimatay qaraxa, oo ahaa mid wadada dhinaceeda lagu aasay.
Masuuliyiinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida iyo Saraakiisha Militariga Somaliya ayaan illaa iyo hadda ka hadlin qaraxa maanta lala eegtay gawaaridii uu la socday Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Waxay aheyd, bilowgii toddobaadkan markii Deegaanka Tareedisho qarax lagula beegsaday gaadiid ay la socdeen Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
qarax lala beegsaday
Xasan Cali Nuur (Shuute)